घरेलु रक्सी पिउनु भो , रक्सीमा मिसीएको थियो प्याड र पिसाब ! - Nepal Post Daily
घरेलु रक्सी पिउनु भो , रक्सीमा मिसीएको थियो प्याड र पिसाब !
दाङ —दाङमा उत्पादन हुने घरेलु मदिरा (रक्सी)मा महिलाले महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिएका प्याड र पिसाब प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ ।
दाङमा घरेलु रक्सी बनाउनेहरुले अन्नसँगै महिलाले महिनावारीका बेला प्रयोग गर्ने प्याड, पुराना बोरा, जुत्ताचप्पल र पिसाबको प्रयोग गर्ने गरेको भेटिएको हो ।
Previous articleनेकपाले टुंग्यायो जनवर्गीय संगठनको एकता, को–को बने अध्यक्ष ?
Next articleप्रदेश २ को सञ्चार विधेयक : पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवाना